६५ वर्ष अघिको नेपाल, ऐतिहासिक र दुर्लभ तस्बिर ! हेर्नुहोस – ejhajhalko.com
६५ वर्ष अघिको नेपाल, ऐतिहासिक र दुर्लभ तस्बिर ! हेर्नुहोस
३ पुष २०७४, सोमबार ०९:१० 221 पटक हेरिएको
६५ वर्षअघिको काठमाडौं कस्तो थियो होला ? अनुमान गर्नुस् त । पक्कै पनि ! तपाईंलाई लाग्दो हो– अहिलेको भन्दा केही अविकसित त थियो होला ।
तर, हैन । ६५ वर्षअघिको नेपालका तस्बिर हेर्दा तपाईं अहिलेको काठमाडौं कुनै सहर नभएर गाउँ थियो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुहुन्छ । हुन त थियो पनि त्यस्तै । ६५ वर्षअघिको काठमाडौं नेपाली कुनै ग्रामीण जनजीवन वा भनौं गाउँभन्दा फरक देखिँदैन ।